သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: March 2009
ကိုယ်က ချစ်ချစ်တောက်ပူနေသည်။ ခေါင်းတွေက ထိုးကိုက်နေသည်။ ရှေ့မှာရပ်နေသော ပုံ၇ိပ်တစ်ခုက လက်ထဲကို စာအုပ်တစ်အုပ်ကို အတင်းထိုးထည့်ပေးနေသည်။
"မယူချင်လဲ ခဏလေးဖြစ်ဖြစ် ဖွင့်ကြည့်ပါနော်"
"မကြည့်ချင်ဘူး၊ မြင်ပြီးလဲ ဘာမှမထူးဘူးလေ"
"ခဏလေးပါ၊ ပြီးတော့ နွှင့်ပစ်ချင်လဲပစ်လိုက်.. နော်"
သူမ လက်ထဲကို အတင်းထိုးပေးနေသည်က အပြာရောင် scrap book တစ်အုပ်
"ကျမ မယူချင်ဘူးလို့ ပြောပြီးပြီ၊ ကျမ မယူသင့်ဘူး၊ ယူလို့လဲမရဘူး၊ ယူချင်စိတ်လဲမရှိဘူး"
"ခဏလေးပါဗျာ၊ မယူလဲ ကြည့်ရုံလေးကြည့်ပေးပါ၊ ကျနော့်ခံစားချက်လေး တစ်စွန်းတစ်စ မြင်ပေးသွားပါ။ ဒီစာအုပ်တစ်အုပ်လုံးဟာ ခင်ဗျားအတွက် ကျနော့ရဲ့ သွေးတွေပါ။ "
စိတ်ရှုပ်စွာသက်ပြင်းချပြီး စာအုပ်ကို မရဲတရဲဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်။
စာအုပ်ထဲက အာဖရိကဗုံသံတွေ၊ တယောသံတွေ၊ အပြာရောင်ခြေအိပ်တွေ၊ ကိုငှက်ကြီးရဲ့ သီချင်းသံတွေ နဲ့ ကဗျာတိုကဗျာစ၊ သီချင်းအပိုင်းအစတွေ ခုန်ပျံထွက်လာသည်။
ချစ်ခြင်မေတ္တာ အားကောင်းလေလေ ပဲ
မျက်လုံးချင်း လွတ်ထွက်သွားမှာစိုးလို့ 
အသက်ငွေ့ ငွေ့ တောင် မရှုရှိုက်ရဲ ဘူး
ကျနော်တို့နှုတ်ခမ်းများနဲ့ 
"ပိတောက်တွေ ရွှေရည်လူးခဲ့ ပေါ့လေ ပုလဲငုံ စံပါယ်ဖြူ ဖူးခိုက်ဝေဝေ
ချစ်သူ ကို ရည်စူးခူးလှဲ့ လို့ ချွေ
ကိုယ်တိုင်လှရာရာ ရွေးလို့ဆင်မပေးရ ဆံမြညှာကေ
စစ်မြေမှာ ကြာညောင်ရက်ရှည် ရောက်မယ်ထင်တဲ့ မျော်တဲ့ သူပူဗျာပွေ ထွေထွေ ဆွေးရှာတော့မယ်လေ..."
"နိဗ္ဗာန် ကို ဝင်တဲ့ အခါ ချစ်သူနှစ်ဦးလက်တွဲ ဝင်လို့ မရတဲ့ အတွက် သံသယာမှာပဲ နှစ်ယောက်တွဲ ဆက်ကျင်လည်မယ်"
စာအုပ်ထဲမှာ အခြားသော ဖြတ်၊ကပ်၊ညှပ်ပုံလေးတွေ၊ ပန်းချီတွေ၊ ကဗျာတွေ၊ စာစုတွေကြားက ရီဝေနေတဲ့ မျက်ဝန်းတစ်စုံ၊ ထိုမျက်ဝန်းထဲမှာ သူမ၏ ပုံရိပ်။ နောက်မျက်ဝန်းတစ်ခုထဲမှာ သူသေဆုံးလျှင် လဲလျောင်းမည့် အုတ်ဂူ။ နောက်ပြီး ထိုစာအုပ်လေးထဲမှာ သူမအကြိုက်ဆုံးသီချင်းသံစဉ်တွေ သာယာငြိမ့်ငြောင်းစွာ လွင့်မျောနေသည်။
"ရော့ နေမကောင်းနေတုန်း ကော်ဖီပူလေးသောက်လိုက်နော်၊ ကျနော် သံပုရာသီးလေးပါ ညှစ်ခဲ့ပေးတယ် နောက်ပြီး ကဗျာလေးတွေလဲ အများကြီး စပ်ထားပေးသေးတယ်။ နေကောင်းတော့ဖတ်လို့ရအောင်လေ"
ကော်ဖီခွက်ကို လှမ်းယူစဉ် အပေါက်ဝမှ အလင်းရောင်တန်းတွေ ၀င်လာသည်။
အလင်းရောင်ကို ကျောပေးပြီး မိန်းမနစ်ဦးရပ်နေသည်။
"အဲဒီစာအုပ်က အတုအယောင်၊ ဟန်ပြပါ"
"ဟုတ်တယ်…. အဲဒီအထဲက ခံစားချက်တွေဟာ အကုန်လုံး အတုအယောင်တွေချည်းပဲ"
စာအုပ်ကို တုန်ယင်စွာပိတ်လိုက်ပြီး သူမ ရင်မှာ အပ်ထားမိသည်။
"မ ဟုတ်ဘူး.. လုံးဝမဟုတ်ဘူး။ ဒါတွေဟာ အစစ်တွေချည်းပါ။ သူတို့ ကျနော် ခင်ဗျားအပေါ်မှာထားတဲ့ အချစ်ကို သူတို့ မနာလိုလို့ပြောတာ၊ ကျနော် ခင်ဗျားကို ဒီလောက်ချစ်တာ မသိဘူးလားဟင်"
မျက်ရည်ဝိုင်းသော မျက်လုံးတွေနှင့် စိုက်ကြည့်နေသော သူ့ပုံရိပ်က တဖြည်းဖြည်းေ၀၀ါးလာနေသည်။ တံခါးဝမှာ ရပ်နေသော မိန်းမအရိပ်နှစ်ခုကလဲေ၀၀ါးလို့ ကွယ်ပျောက်သွားသည်။
သူ့ကို အံ့သြစွာ စိုက်ကြည့်နေမိသည်။
"မဟုတ်ဘူး၊ မဟုတ်ဘူး… ကျနော်.. ကျနော်…."
သူ့ ပုံရိပ်က သူမစိုက်ကြည့်နေစဉ်မှာပင် မှုန်ဝါးလာရာမှ တဖြည်းဖြည်း ပျောက်ကွယ်သွားသည်။
သူမ ငုတ်တုပ်ဆက်ထိုင်နေသည်။ သူမ ပေါင်ပေါ်မှာတော့ အပြာရောင်စာအုပ်က ငြိမ်သက်စွာလဲလျောင်းနေသည်။
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:28 AM5comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : စာစု, တစ်မျက်နှာဝတ္ထု
တော်ဝင်ရာ ဂေါ်သဇင် လွှာ မဟုတ်ပေမယ့်
ဒီက တပင်ထဲသော စပယ်ပင်လေးလဲ အဖူးတွေနဲ့မို့ ပွင့်တာနဲ့ ပို့စ်တင်မလို့
“စပယ်ဖြူတောင်ပွင့်ပြီကွယ်” သီချင်းဆိုရင်း ရေလောင်းနေတယ် မလေးရေ
Comment by sonata-cantata — March 10, 2009 @ 12:06 am
လန်းနေရင်ထွေးကာယုလို့….i like that phrase :)
Comment by westcoast22 — March 10, 2009 @ 12:19 am
ပန်ကိုင်ထားပေးတာက ဘယ်ကမော်ဒယ်လေးတုန်း အစ်မရး) အင်္ကျီအကွက်ကျားလေးနဲ့ စံပယ်ပန်းလေးကလိုက်တယ် ။ စံပယ်ရနံ့လေး ကျနော်ကြိုင်တယ် သင်းထုံထုံလေးမို့ ကာရန်ရွေးပေးတဲ့သူက တော်လှချေလား ရုပ်ရှင်လက်မှတ်ထဲက သူငယ်ချင်းများလား :)
Comment by မောင်မျိုး — March 10, 2009 @ 2:13 am
Comment by ကိုသားငယ် — March 10, 2009 @ 3:47 am
ဘယ်သူ့လက်လဲ မှန်မှန်ပြောနော်.. လက်ကယောက်ျားလေးလက်…။ ကဗျာကလေးခံစားသွားတယ်..။
Comment by Phyo Evergreen — March 10, 2009 @ 4:37 am
ချစ်စုလည်း စံပယ်ပန်း အရမ်းကြိုက်တယ်။ အနံ့ကော၊ အဆင်းကော။ မနက်အိပ်ရာနိုးလာရင် စံပယ်ပန်း အနံလေးနဲ့ နိုးလာရရင် စိတ်ကိုကြည်လင်နေတာပဲ။ ချစ်သှူဆီက စံပယ်ပန်းလေးကိုလည်း စိတ်ကူးယဉ်ဘူးတယ်။ စိတ်ကူးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားမသိပါဘူး မလေးရယ်။ ဒီမှာ လည်း စံပါယ်ပန်းရတယ်။ ကုလားဆိုင်တွေမှာ။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်က ပန်းလောက်မမွှေးဘူး။ မြန်မာပြည်မှာတောင်မှ ညီမတို့ အညာကပန်းကပိုမွှေးတယ်။ ရန်ကုန်က စံပယ် က သိပ်မမွှေးဘူးထင်တာပဲ။ ဟဲဟဲ…:P
Comment by ချစ်စု — March 10, 2009 @ 8:06 am
sonata-cantata…. မလေးရဲ့ ဇီဇ၀ါပင်သေးသေးလေး ပွင့်တော့မယ် မသီတာရေ.. မသီတာက စပယ်တင်.. မလေးက ဇီဇ၀ါတင်မယ်လေ.. (သီချင်းဆိုရင်း ပန်းရေလေးလောင်းတာ ကိုဧရာလဲ ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် မသီတာလို့ ကောက်ချက်ချလိုက်တယ်နော်)
westcoast22 .. အခုမှပဲ ကော့မန့်ရေးတော့တယ်
မောင်မျိုး .. ငါ့မောင်ကတော့ နပ်တယ်နော်..
Phyo Evergreen .. မပြောရဘူးတဲ့၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ်သာ စာသာရေးပါတဲ့.. သူက မလေးထက်ရှက်တတ်တယ်မောင်လေးရေ့.. အပေါ်က လေဘယ်လ်သာကြည့်လိုက်ကြပါတော့နော်
ချစ်စု … (ကဲ.. ဟိုတယောက်ကြားတယ်နော်.. စံပယ်ပန်းနံ့နဲ့ နိုးထချင်တယ်တဲ့ ပြောနေပြီနော်) ဖြစ်မှာပါညီမရေ.. မလေး သေချာပေါက်သိတယ်။ ဟုတ်မယ်.. အညာကပိုပူတော့ ပိုမွှေးနိုင်တယ်.. ဒီကပန်းတွေဆို အနံ့တောင်မရှိဘူးချစ်စုညီမရေ..
Comment by မလေး — March 10, 2009 @ 12:10 pm
စံပယ်ကို လည်နေကျနေရာလေးမှာ မတွေ့ ဘူးနော်…
ဟိုဘက်မှာ ဘာလို့ မတင်လဲအိမ့်ရေ…
ကဗျာလေးက လှလိုက်တာ… ကာရံလေးလဲ ချိုနေတာပဲ…
အိမ့်ဇီဇ၀ါပင်လေး ပွင့်အောင် ဘယ်လို ပြုစုလဲဟင်…
အမဇီဇ၀ါပင်လေးက ၀ယ်တာ ၁နှစ်နီးပါးရှိပြီ ခုထိတပွင့်မှ မပွင့်သေးဘူး…
Comment by တန်ခူး — March 10, 2009 @ 9:54 pm
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:17 AM2comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : ကဗျာ, ကိုယ့်လူ
မြန်မာပြည်ကအပြန် အရင်တစ်ခါတွေတုန်းကလိုပဲ ကောင်းနိုးရာရာ စာအုပ်လေးတွေ ၀ယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အချို့စာအုပ်တွေက ဖတ်ဖူးပြီးသားပေမယ့်လဲ စာအုပ်စင်မှာ ထားချင်တာနဲ့ ၀ယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျမ ရန်ကုန်ကိုရောက်နေချိန်မှာ အင်းဝစာအုပ်တိုက်ကလဲ အမျိုးသမီးစာရေးဆရာမများရဲ့ စာအုပ်ရောင်းပွဲ ကျင်းပနေတာနဲ့ ကြုံတော့ အင်းဝ စာအုပ်ဆိုင်ထဲ ၀င်သွားလိုက်တာနဲ့ လူတွေက ကြိတ်ကြိတ်တိုး၊ စာအုပ်တွေကလဲ အမျိုးမျိုးပါပဲ။
ကျမရဲ့ အပြန်ခရီးဆောင်အိတ်ထဲမှာ ဒန်အိုးတွေရယ်၊ ပန်းပုတွေရယ်၊ စာအုပ်တွေရယ်နဲ့ ပြည့်သိပ်နေတော့၊ စာအုပ်တွေကိုတော့ မပိမပြားမခေါက်သွားအောင် အ၀တ်နဲ့ပတ်ပြီး သယ်လာခဲ့တယ်။ ကနေဒါပြန်အရောက် ရာသီဥတုအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ အိမ်ရှေ့ခန်းမီးပုံဘေးမှာ ၀ယ်လာတဲ့ စာအုပ်တွေကို တစ်အုပ်ပြီးတစ်အုပ် ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ၊ ကိုယ်ကြိုက်မယ်ထင်ထားတဲ့၊ ကိုယ်အရမ်းမျှော်လင့်ထားတဲ့ စာအုပ်တွေက ထင်သလိုမဟုတ်ဘဲ၊ ကိုယ်လုံးဝ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ စာအုပ်လေးတွေက စိတ်ကို လာပြီး ထိတွေ့ပါတယ်။
အပေါ်မှာ ပြထားတဲ့ ကောင်းကျော် (စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်) ရဲ့ အယ်ဒီတာများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးကတော့ Ocean Superstore က ၀ယ်လာတာပါ။ ကျပ်ငါးရာလားပဲပေးရပါတယ်။ ငါးဆယ်ဆင့်ပေါ့နော်..။ အဲဒီငါးဆယ်ဆင့်ပဲပေးရတဲ့ စာအုပ်ပါးပါးလေးဟာ ဗဟုသုတတွေအများကြီး ကျမကို ပေးလိုက်လို့ စာဖတ်သူများနဲ့ အနည်းငယ်မျှဝေလိုပါတယ်။ (ဆိုလိုတာ.. အချို့အရာတွေကို ငွေကြေးနဲ့ တန်ဘိုးဖြတ်လို့မရဘူးလို့ ဆိုလိုချင်တာပါ)။
ပထမဦးဆုံး အယ်ဒီတာ ခင်မောင်တိုး (မိုးမိတ်)နဲ့ တွေ့ဆုံခန်းမှာ ဆရာ့ကို စာရေးချင်စိတ်ဖြစ်လာအောင် စေ့ဆော်ခဲ့တာတွေကတော့ မြ၀တီမဂ္ဂဇင်း၊ စာရေးဆရာကြည်မြ နဲ့ တောင်ငူ အလွတ်သင်ဆရာဘ၀ အတွေ့အကြုံတွေက စေ့ဆော်ခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။ ဆရာ အသက် ၁၂နှစ်အရွယ်တုန်းက ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ မြ၀တီမဂ္ဂဇင်း အတွဲ(၁)၊ အမှတ် (၁)ဟာ ၂ကျပ်ပေးရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နောက် ဆရာ့ရဲ့ စာရေးဆရာ ဘ၀အတွေ့အကြုံတွေကို ဆက်ဖတ်ရပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ ဆရာ့ကို မေးခွန်းတစ်ခု အင်တာဗြူးသူက မေးပါတယ်။ မဂ္ဂဇင်းတွေ ပန်းဝင်ကောင်းအောင် ဘယ်လိုအမှာစကားပြောချင်ပါသလဲတဲ့...။
အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ...... အမှန်ပဲဗျာ။"
ကျမ အဲဒီစာပိုဒ်ဖတ်အပြီးမှာ အချိန်တော်တော်လေးကြာအောင် စဉ်းစားခန်းဝင်နေမိခဲ့တယ်။
ဒုတိယတစ်ယောက်အနေနဲ့ အယ်ဒီတာ ဆရာနတ်နွယ်က ခံစားချက်လေးတွေ ဝေမျှပါတယ်။
၁၉၅၇ မှာ လုံးချင်း (၃)အုပ် ထွက်ဖြစ်တယ်။ ၁၉၆၃ နောက်ပိုင်းမှာတော့ လုံးချင်း (ရ) အုပ်ထိ ထွက်အောင်ရေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အယ်ဒီတာတွေဟာ ထုတ်မယ့် မူ ကို နိုင်နင်းရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲဒါကို မနိုင်နင်းရင်တော့ စာမူစုထည့်သူ ပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အယ်ဒီတာတွေဟာ စာရေးဆရာတွေကို လေးစားရမယ်။ လိုအပ်လာလို့ ပြင်ဆင်ချင်ရင် ညှိနှိုင်းရမယ်၊ အကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်လာရင် သဘောတူညီမှုရအောင် ညှိရမယ်။ စာရေးသူက ဒါကိုတော့ မဖြုတ်ပါနဲ့၊ မပြင်ပါနဲ့ဆိုရင် စာရေးသူ သဘောဖြစ်ရမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
စာပေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် အယ်ဒီတာတွေဟာ အရှိန်အ၀ါ၊ သြဇာ၊ ရင်းနှီးမှုတွေကို ရှောင်နိုင်ဖို့ လိုတယ်လို့လဲ ဆိုထားပါတယ်။
တတိယအနေနဲ့ အယ်ဒီတာ ဆရာချစ်ဝင်းမောင် ကို တွေ့ဆုံခန်းမှာ ဆရာ့ရဲ့ ပထမဆုံး ပုံနှိပ်စာလေးကို မြ၀တီစာတိုက်ကနေ မြင်ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စာမူခ ၃၀ကျပ်ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပထမနှစ်မှာ သိပ္ပံတွဲယူပြီး နောက်တော့ မြန်မာစာကို ပြောင်းယူလိုက်တဲ့ ဆရာချစ်ဝင်းမောင်ဟာ၊ တွေ့ဆုံခန်းမှာ အင်္ဂလိပ်လို ညှပ်ညှပ်ပြောတာကို ကျမ သတိထားမိပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီကနေ့ ရေပန်းစားနေတဲ့ ဂမ္ဘီရဆိုတာကို သူက သိပ်ပြီးသဘောကျပုံမရဘူး။ ဂမ္ဘီရဟာ ဂျပန်မှာရှိတဲ့ ဂုဏ်းကြောင့် လူတွေ ထင်ယောင်ဝိုးဝါးဖြစ်စေပြီး၊ မွန်းကျပ်နေတဲ့ လူ့အစည်းအဖွဲ့ထဲက လူတချို့ရဲ့ ထွက်ပေါက်ရှာယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ သဘောနဲ့ တူနေတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ ကျမ တွေးခေါ်တာနဲ့ ဆရာချစ်ဝင်းမောင်တွေးတာ ကွဲပြားမှုရှိနေပါတယ်။ လူ့သဘာဝအရ ယုံကြည်ချက်၊ ခံယူချက်၊ ခံစားချက်တွေဟာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ တသတ်မှတ်တည်းဖြစ်မနေနိုင်ဘူး (ဖြစ်လဲမဖြစ်သင့်ဘူး) လို့ ကျမ ယူဆမိလို့ပါ။
ဒီနေ့ မြန်မာ မဂ္ဂဇင်းတွေပေါ်မှာမြင်တဲ့ အမြင်ကတော့ အားရကျေနပ်စရာ တစ်အုပ်စ နှစ်အုပ်စပဲ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အယ်ဒီတာများဟာ trend ဆိုတဲ့ စကားကို သုံးကြတာကို ကျမ တွေ့ရတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က မဂ္ဂဇင်းတွေဟာ literature၊ ဖက်ရှင်၊ အားကစား စသဖြင့် သန့်သန့်တွေလုပ်နေကြချိန်မှာ မြန်မာပြည်က မဂ္ဂဇင်းတွေကတော့ ဖော်မြူလာတစ်ခုလို အစုံထည့်တယ်လို့ သူကဆိုပါတယ်။
ဆရာ့စေတနာကို ကျမ နားလည်ပေမယ့် ကျမတို့ တိုင်းပြည်မှာ ဒီလိုသတ်သတ်ခွဲထုတ်ရအောင် literature၊ ဖက်ရှင်၊ အားကစား စသဖြင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မရှိသေးတာလဲ ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဆရာဆက်ပြောတာကတော့ ဂျာနယ်လဇ်စ်တွေဟာ မင်းသား၊ မင်းသမီး နဲ့ အဆိုတော်တွေကို ဗြူးနေရုံလောက်နဲ့တော့ ဂျာနယ်လဇ်စ်မဟုတ်ဖူးလို့ ဆိုပါတယ်။ တကယ့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးတွေကို ယေဘုယျကျကျ သုံးသပ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေရှိရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကဗျာဆရာတွေဟာ ကဗျာရေးတာ၊ ၀တ္ထုဆရာက ၀တ္ထုရေးတာ အကောင်းဆုံးပဲလို့ဆိုပါတယ်။ ရွှေဥဒေါင်းတို့လို၊ ပီမိုးနင်းတို့လို စာစုံရေးနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးလို့ ဆိုပါတယ်။
သူပြောတဲ့အထဲမှာ ကျမအတွက် အဖိုးတန်တဲ့ စကားတစ်ခုကတော့...
(၂) ဒဿန တစ်ခုခုပါရမယ်....
အနုပညာမမြောက်ဘဲ အချက်အလက် ပေးရုံအဆင့်နဲ့ ၀တ္ထုတစ်ပုဒ်အဖြစ် မသတ်မှတ်ချင်ဘူး။ မိမိခံစားမှုမပါဘဲ ၀ါဒတစ်ခုရဲ့ သြဇာခံသက်သက်၊ ကြွေးကြော်သံသက်သက်၊ လူကြားကောင်းအောင် ရေးတဲ့ဝတ္ထုမျိုးတွေ ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး။
စတုတ္ထအနေနဲ့ အယ်ဒီတာ ဆရာမောင်သွေးသစ် နဲ့ တွေ့ဆုံခန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာသွေးသစ်က ပန်းတနော်သားလို့ သိရပါတယ်။ အမျိုးများတော်နေမလား မသိဟု ကျမ ပြုံးပြီး တွေးမိလိုက်ပါတယ်။ ကျမ ဖေဖေက ပန်းတနော်သားဖြစ်ပြီး၊ မေမေ့အဘိုးအဘွားတွေကတော့ ပုတီးကုန်း၊ ပေါင်းတလည် ဇာတိဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာ့ရဲ့ ရှေးဦးနှစ်တွေမှာလည်း ကျမဖေဖေတက်ခဲ့တဲ့ စိန့်ပေါကျောင်းကဆိုတော့ တိုက်ဆိုင်မှုတွေလေးတွေက ကျမကို ပြုံးမိစေပါတယ်။
ဆရာပြောတဲ့ စကားတွေထဲမှာ ကဗျာဆရာတွေအတွက် စကားလေးကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်..။
ကြေးစားမဟုတ်ဘူး၊ တန်းညီအောင် မရပ်တတ်ဘူး၊
တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးပေါင်းစုံတွက် အထူးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပဲ။
အဲဒီပြောရေးဆိုခွင့်အတွက် သတိရှိရမယ်၊ ဇွဲရှိရမယ်၊ မာနရှိရမယ်၊
ထွက်သက်ရပ်သွားတဲ့ အချိန်အထိ ကဗျာဆရာအဖြစ် ရပ်တည်ရဲရမယ်။
ကဗျာဆရာဆိုတာ အတွေးရှင်းရမယ်၊ အတွေးရှင်းမှ အရေးရှင်းတယ်၊
ရိုးဂုဏ်ရှိတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ဟာ အင်မတန်ကို လှပပါတယ်။
အယ်ဒီတာတစ်ယောက်ရဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်လိုက်တာနဲ့ ဒီကဗျာဟာ ရိုးဂုဏ်ရှိတယ်မရှိဘူး၊ စတန့်တွေ၊ ဟန်တွေ အတင်းဖျစ်ညှစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ “လုပ်ပုံ”တွေကို ခွဲခြားသိတယ်လို့လဲ ဆိုပါတယ်။
ဆရာဟာ သူ့ရဲ့ အယ်ဒီတာဘ၀ကို သူ့ဘ၀နဲ့လဲယူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မိုးကောင်းမှာသာ ဆက်ကျင်လည်ရင် အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုကြောင့် ငွေကြေးအများရှိနေလောက်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။ အခုတော့ ကျွန်တော့ဘ၀ဟာ ကျွံသွားပြီ ဆိုတဲ့ သူ့စကားထဲမှာ ၀မ်းနည်းမှုအရိပ်တွေတွေ့ရတယ်လို့ ကျမ ထင်ပါတယ်။
ဆရာမောင်သွေးသစ်ဟာ မိုးဝေခေတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း သူ့ခံစားချက်တွေကို တင်ပြသွားပါတယ်။
အယ်ဒီတာတစ်ယောက်ရဲ့ ပီတိဟာဘာလဲဆိုရင် .. ရသစာပေသက်သက် ဖတ်ချင်သူများအတွက်၊ ရသစာပေသက်သက်ရေးချင်သူများအတွက်၊ စာရေးသမားအသစ်တွေ ပေါ်ထွက်လာဖို့အတွက်၊ ကဗျာသမားအသစ်တွေ ပေါ်ထွက်လာဖို့အတွက်၊ အယ်ဒီတာတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ စွမ်းဆောင်နေနိုင်သမျှ ပီတိဖြစ်ရမှာပါပဲလို့ ဆိုပါတယ်။
ငါးယောက်မြောက်အနေနဲ့ အယ်ဒီတာ မောင်တည်ငြိမ် နဲ့ တွေ့ဆုံခန်းမှာ ဆရာဟာ စာရေးဆရာမကြီးကလျာ နဲ့ ကာတွန်းဦးစိန်ကြီးတို့ ဦးစီးထုတ်ဝေတဲ့ ရွှေရုပ်လွှာရဲ့ အယ်ဒီတာ၊ ကဗျာဆရာ တက္ကသိုလ်ကြိုင်သင်းလက်ထဲကို၊ သူ့ရဲ့ကဗျာထည့်ပေးပြီး "ရွေးမယ်ဆို ကလောင်အမည်တစ်ခုပါ ရွေးပေးပါ" လို့ ပြောလိုက်တယ်တဲ့။ ကဗျာပါလာတော့ ကလောင်အမည်က မောင်တည်ငြိမ် အမည်နဲ့ ပါလာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဆရာမောင်တည်ငြိမ်ဟာ ကဗျာမှ သီချင်းတွေကို ကူးပြောင်းသွားပုံတွေကိုလဲ ပြောသွားပါတယ်။ ကဗျာနဲ့သီချင်းဟာ ဆွေမျိုးအရင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ ဆရာတက္ကသိုလ်ဖုန်းနိုင်ရဲ့ စကားကိုလည်း ထည့်သွင်းဆွေးနွေးသွားပါတယ်။ နောက်ပြီး ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ ညိုပြာပြာ လတာပြင်ခြေရင်း၊ လှိုင်းတက်ရာဗေဒါတက်၊ လှိုင်းသက်ရာဆင်း ဆိုတဲ့ ကဗျာလေး သီချင်းဘ၀ရောက်တဲ့ အကြောင်းတွေလည်း ထည့်သွင်းဆွေးနွေးသွားပါတယ်။ ကျမ အဲဒီမှာ hip hop ဂီတကို သွားသတိရလိုက်မိတယ်။ ကျမ ကဗျာတစ်ပုဒ်စပ်ရင် ကျန်တဲ့ ကဗျာစပ်သူများတော့ မသိဘူး၊ ကျမတော့ စာရွက်နဲ့ဘောပင်နဲ့ ချရေးထားရပါတယ်။ သီချင်းတစ်ပိုဒ်စာ ကာရန်ညီအောင် ဘယ်လိုမှ နှုတ်ကလက်တန်းရွတ်သွားလို့ မရပါဘူး။ hip hop ဂီတ သမားအချို့ကတော့ကာရန်တွေညီပြီး သီချင်းတစ်ပိုဒ်စာ လက်တန်းရွတ်သွားနိုင်လောက်တဲ့မွေးရာပါ ဗီဇတွေကို မြင်တွေ့နေရပါတယ်။
ဆရာက အယ်ဒီတာတွေကို အမျိုးအစားလဲ ခွဲပြသွားပါတယ်။ ကာရန်မိသလို ဟသ ရသလေးကိုပါ ခံစားကြည့်ကြပါ။
"သဒ္ဒါမတတ် အယ်ဒီတာ၊ စာမဖတ်အယ်ဒီတာ
ရှဲဒိုး အယ်ဒီတာ၊ ပွဲမတိုး အယ်ဒီတာ
ဖောင်စား အယ်ဒီတာ၊ ကလောင်ပွား အယ်ဒီတာ
ချွန်တွန်း အယ်ဒီတာ၊ ညွှန်မွှန်း အယ်ဒီတာ
ပွဲတိုင်းရောက် အယ်ဒီတာ၊ ကျွဲရိုင်းသောက် အယ်ဒီတာ
တပည့်မွေး အယ်ဒီတာ၊ ခနဲ့ရေး အယ်ဒီတာ
အမြှောက်ကြိုက် အယ်ဒီတာ၊ အခြောက်ဂိုက် အယ်ဒီတာ
အပျင်းအပျော့ အယ်ဒီတာ၊ ပုလင်းမော့ အယ်ဒီတာ
လိုတစ်မျိုး မလိုတစ်မျိုး အယ်ဒီတာ၊ ဟိုတစ်မျိုး ဒီတစ်မျိုး အယ်ဒီတာ
ဝေဖန်ရေး အယ်ဒီတာ၊ ငွေဖန်ရေး အယ်ဒီတာ..."
ရယ်လို့.. ခွဲခြမ်းပြသွားတော့ သူတင်ပြပုံကြည့်ပြီး ကျမ တစ်ယောက်ထဲ ပါးစပ်ပိတ်လို့ ကြိတ်ရယ်မောမိပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ အယ်ဒီတာ ဆိုတဲ့ နေရာမှာ တစ်ခြား စာလုံးလေးတွေ ထည့်ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရွတ်ကြည့်မိပါသေးတယ်။ အယ်ဒီတာနေရာမှာ ဘလော့ဂါဆိုတဲ့ စာလုံးလေး ထည့်ရွတ်ကြည့်ရင်တော့ သဒ္ဒါမတတ် ဘလော့ဂါနေရာမှာ အိမ့်ချမ်းမြေ့ ထိပ်ဆုံးက ပါမယ်ထင်ပါတယ် (သဒ္ဒါတော့ သိပ်မဆိုးပါဘူး၊ စာလုံးပေါင်းတော့ တော်တော်လေးဆိုးပါတယ်)။ ကလောင်ပွားတာဆိုတာတော့ သိပ်နားမလည်၊ တခြားနာမယ်တုတွေနဲ့ ရေးတာလားမသိ၊ အဲဒါဆိုရင်တော့ ကျမ မပါပါ။ အိမ့်ချမ်းမြေ့ ကလောင်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲ ရေးပါတယ်။ အခြားအမည်တွေနဲ့ ဘယ်တော့မှ မရေးပါဘူး၊ သူများဆီဗုံးတွေမှာ၊ ကော့မန့်တွေမှာလဲ အိမ့်ချမ်းမြေ့ သို့မဟုတ် မလေးကလွဲပြီး ဘာနဲ့မှ မရေးပါဘူး၊ ပုလင်းလဲ မမော့တတ်ပါဘူးလို့ ........(ပိုက်နဲ့ပဲ.... ရေသောက်တာပါ)။
ရှဲဒိုးအယ်ဒီတာဆိုလို့ အယ်ဒီတာမှာတောင် ရှဲဒိုးအယ်ဒီတာ ရှိတာ ကျမခုမှသိတယ်။ ရှဲဒိုးစာရေးဆရာနဲ့၊ ရှဲဒိုးဘလော့ဂါတွေပဲရှိတယ်ထင်ခဲ့တာ။ စာဖတ်များရင် ဘယ်ဘလော့ဂါဟာ မိန်းကလေးနာမယ်နဲ့ ရေးနေတာလဲ၊ အသက် အရွယ်ဘယ်လောက်လဲ စသဖြင့် သူ့ရဲ့လေယူလေသိမ်း၊ စကားလုံး အသုံးအနှုန်းတွေမှ တဆင့် မြင်ရတတ်ပါတယ်။ အချို့စကားလုံးတွေဟာ ဥပမာ၊ ၁၉၆၀ခုနှစ်တွေမှာ မွေးတဲ့လူတွေ သုံးတာမျိုး၊ ၁၉၇၀ခုနှစ်တွေမှာ မွေးတဲ့သူတွေသုံးတာမျိုး၊ စသဖြင့် သတိပြုမိရင် သိရပါတယ်။ ရှိတဲ့ အသက်ထက် ကြီးသလိုလိုနဲ့ စာရေးနေသူတွေလဲ ရှိပါတယ်။ အဘိုးကြီး အဘွားကြီးလိုရေးနေပြီး တစ်ကယ်က သုံးဆယ်ကျော်စလေးတွေလဲ ရှိတာကို ကျမ သတိထားမိပါတယ်။ (နဂို အဘိုးကြီး၊ အဘွားကြီး ပုံစံထွက်နေရင်တော့ မသိဘူးပေါ့နော်) နောက်ပြီး ဘလော့တစ်ခုမှာ လူဘယ်နှစ်ယောက်ရေးနေလဲ၊ ပိုစ်တစ်ခုမှတစ်ခု လေသံတွေပြောင်းပြောင်းသွားတာက အစ၊ စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ သိပ်ကောင်းပါတယ်၊ မှန်တယ်မှားတယ်မပြောပါဘူး။ ဒီလိုလုပ်တာ မှားတယ်လို့ ကျမ မပြောပါဘူးနော်။၊ ဒါပေမယ့် လေ့လာကြည့်ကြပါ၊ အထူးသဖြင့် ယောင်္ကျားလေးတွေ မိန်းကလေးထင်ပြီး သွားညုနေပြီး အဲဒီဘလော့ဂ်က ယောင်္ကျားကြီးက ရေးနေရင်... ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်...း)))
နောက်ဆုံးတစ်ယောက်အနေနဲ့ကတော့ အယ်ဒီတာ ကဗျာရှင်ဆရာကောက်နွယ်ကနောင် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာကတော့ ကဗျာသမားဆိုတော့ ကဗျာတွေအကြောင်း အကြေအလည် ရှင်းလင်းသွားပါတယ်။
"မုန်တိုင်းထဲက တေးဆိုငှက်ဟာ ကဗျာသမားတစ်ယောက်ဘ၀၊ သိဒ္ဒိပြီးမြောက်တဲ့ ၀ိဇာဇော်ဂျီတွေ ဥုံခံမန်းမှုတ်လိုက်တာနဲ့ ဟောတစ်ပုဒ် ဟောတစ်ပုဒ် ကဗျာတွေ ထွက်မလာဘူး။ တဖြုတ်ဖြုတ် ပေါက်ကွဲနေတဲ့ ဆပ်ပြာပူဖောင်းထဲမှာ ကဗျာမရှိဘူး။ အမှိုက်ဒိုက်ကြားဝင်ပြီး မျောနေတဲ့ သစ်ဆွေးတုံးတွေ၊ ထိလိုက်ရင်ခွေတဲ့ ထိကရုန်းတွေ၊ ယုန်တစ်ကောင်ရဲ့ အသည်းနဲ့ ပခြုပ်ထဲကမြွေဟာ ကဗျာဆရာမဟုတ်ပါဘူး"
ဆယ်ကျော်သက်ကလေးတွေစကားနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျမ အဲဒီမှာ အကြီးအကျယ် ဟတ်ထိသွားပါတော့တယ်။
"နားလည်ခြင်း၊ နားမလည်ခြင်းဟာ အနုပညာမဟုတ်ပါဘူး။ အနုပညာဆိုတာကို ဘောင် စည်းတွေနဲ့ တုပ်နှောင်ထားလို့ မရဘူး။ အနုပညာဟာ သူ့ဘာသူ လွတ်လပ်နေတယ်။ ကဗျာရေးသူက သူခံစားသလိုတွေးပြီး ခံစားသင့်ရာ ခံစားနိုင်တယ်။ ကဗျာရေးသူက ဒါဟာ လူပဲဆိုရင် သူ့အတွက်တော့လူပဲ။ ခံစားရတဲ့လူဟာ ခွေးလို့ထင်ရင် သူ့အတွက်ခွေးပဲ။ အရေးကြီးတာ ခံစားတတ်ဖို့ပဲ။"
ဆရာကောက်နွယ်ကနောင် ရေးသားထုတ်ဝေပြီးတဲ့ စာအုပ်တွေကို သူပြောပြတဲ့အခါ မြန်မာနိုင်ငံစာရေးဆရာတို့ အပေါ်မှာ ကျမ မြင်တဲ့ အမြင်ဟာ တစ်နည်းတစ်ဖုံပြောင်းသွားပါတော့တယ်။ ဒီလိုစာရေးဆရာကြီးတွေလဲ ရှိပါသေးလားလို့ ပိုမိုလေးစားမိတဲ့ စိတ်ပါ။ ဆရာထုတ်ဝေပြီးတဲ့ စာအုပ်တွေဟာ သက်တန့်ရောင်ရသ၊ ဧရာဝတီနှုတ်ခမ်းပေါ်မှ နှင်းရည်ဆမ်းသော အိပ်မက် (စုပေါင်းထုတ်ဝေ) နဲ့ အလင်းလျှောက်ဝတ်ရုံထဲက လိပ်ပြာ၊ သုံးအုပ်ပါ။
ကနောင်ဇာတိဖြစ်တဲ့ ဆရာကောက်နွယ်ဟာ ၀ံသာနုလှုပ်ရှားမှု၊ တောင်သူလယ်သမားအရေးတော်ပုံ၊ ရေနံမြေသပိတ်နဲ့ ဂျပန်တော်လှန်ရေးကို မမှီလိုက်တာကို လူဖြစ်နောက်ကျတယ်လို့ ထင်ခဲ့တယ်လို့လဲ ဆိုပါတယ်ရှင်။
ဒီစာအုပ် ပါးပါးလေးကို ဖတ်နေချိန်မှာ ရင်တလှပ်လှပ်နဲ့ ကြည်နူးပီတိဖြစ်နေမိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားတို့၊ ယူရိုချန်ပီယံကြည့်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားသူများ၊ အော်စကာဆုကြည့်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားသူများ ကျမ ကို ကိုယ်ချင်းစာကြည့်နိုင်ပါတယ်ရှင်၊ ဒါကြောင့် ပီတိဖြစ်မှုတွေကို ပြန်လည်ပြီး ဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ မဖတ်ရသေးသူများ ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်ရှင်။
1.	500 Kyats = 50 cents, right?
Comment by EE — March 6, 2009 @ 2:38 am
2.	ဂုဏ်မက်သူမှာ ရိုးဂုဏ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးသက်ဝင်လှုပ်ရှားလာပုံကို သဘောပေါက်သလိုရှိသွားပါတယ်။
Comment by ရှေးစာဆို — March 6, 2009 @ 3:35 am
3.	အဲ့ဒီစာအုပ်လေးလှမ်းမှာပြီး ဖတ်ဦးမှ။ ဆရာကောက် သောင်းပြောင်းထွေလာလို ဟာသဇောင်းပေးမဂ္ဂဇင်းကို ကိုင်တုန်းက အံ့သြရတယ်။ ကဗျာဆရာက ဟာသမဂ္ဂဇင်းကို နိုင်နိုင်နင်းနင်းကိုင်သွားတယ်။ သူကိုင်လို့လည်း သောင်းပြောင်းမှာ (မဆီမဆိုင်ပဲလို့ ထင်ရအောင်) မော်ဒန်ကဗျာတွေ ကောင်းကောင်းကြီး ပါခဲ့တာပေါ့နော်။ ဒါနဲ့ ဆရာကောက်က ကျွန်တော်ဆက်၍ရေးချင်သော ကဗျာများ ဆိုတဲ့ စာအုပ်လည်း ထုတ်ခဲ့ဖူးတယ်ဗျ ။ အမှတ်မှားနေရင်လည်း ပြောပြပေးပါဦး။
Comment by mnm — March 6, 2009 @ 4:36 am
4.	မလေးရေ- သဒ္ဒါမမှန် စာလုံးပေါင်း မမှန်တာခြင်းတော့..တူနေပြီ။
ဟုတ်တယ်- စာတခုကို ဖတ်လိုက်ရင်..တမျက်နှာလောက် ဆိုရင်တောင် စာရေးသူရဲ့ အတွင်းထဲကို လုံလုံလောက်လောက် ထိုးဖောက်မြင်ရတတ်တယ်။
အဲဒါကြောင့်လဲ..အလုပ်လျှောက်လွှာတွေ..ဘာတွေမှာ အက်ဆေး တောင်းတာ..ကာဗာလက်တာ ရေးခိုင်းတာပဲ.. ကူးချထားရင်လဲ..ကူးချထားမှန်းသိသာတယ် နော်။
Comment by K — March 6, 2009 @ 7:14 am
5.	မြန်မာ့အယ်ဒီတာများအကြောင်းကို စိတ်ဝင်တစားဖတ်သွားပါတယ်၊ မအိမ်ချမ်းမြေ့။
Comment by အပြုံးပန်း — March 6, 2009 @ 7:31 am
Comment by kom — March 6, 2009 @ 8:38 am
7.	Ma Lay,
Visited and enjoyed it.
Comment by lynda — March 6, 2009 @ 11:17 am
8.	ကဗျာဆရာ မောင်သွေးသစ်ရဲ့အမြင်တွေကို နှစ်သက် သဘောကျတယ်ဗျာ.. အလေးထားသင့်တဲ့ စကားလုံးများကို မျှဝေပေးတဲ့ ကျေးဇူးပါဗျာ.. ဒါနဲ့ကျွန်တော်က ဆိုက်ပရပ်စ် ကပါ..
Comment by နေညိုရင့် — March 6, 2009 @ 3:30 pm
9.	EE.. ကျေးဇူး..း) ပြင်လိုက်ပြီနော်..
ရှေးစာဆို … ဟုတ်ကဲ့…. ဘယ်လိုမျိုးလဲမသိ
mnm … ကျမလဲ ဆရာကောက်ရဲ့ အင်တာဗြူးကိုဖတ်ပြီး အလေးအနက်သမားဆိုတာကို သတိထားလိုက်မိတယ်။ ကျွန်တော်ဆက်၍ရေးချင်သော ကဗျာများ ဆိုတာတော့ ကျမ မတွေ့မိဘူး။ ဒီအင်တာဗြူးစာအုပ်ထွက်ပြီးမှ ထုတ်တာများလားမသိ။
K... ဟုတ်တယ်.. စာရေးသူရဲ့ အတွင်းထဲကသဏန်က ဖုံးကွယ်ရခက်တယ်နော်။ အထူးသဖြင့် ရသ၀တ္ထုရေးရင် ဇာတ်ကောင်တွေနေရာမှာ ကိုယ့်အာဘော်တွေ ပါပါသွားတတ်တယ်။ အတွေ့အကြုံရတဲ့ စာရေးဆရာတွေတောင် လုံးဝခွဲထွက်ဖို့ ခက်တယ်လို့ ဆိုကြတယ်ကေ..။
အပြုံးပန်း… ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ စာပေနှစ်သက်သူအချင်းချင်းတွေ့ရတာလဲ ၀မ်းသာပါတယ်ရှင်။
kom .. ဟုတ်ကဲ့အမ။
Ain Shin Ma .. မတွေ့တာကြာပေါ့.. လင်ဒါနေကောင်းလား
နေညိုရင့် … ဟုတ်ကဲ့ တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ရှင်။
Comment by မလေး — March 6, 2009 @ 3:37 pm
10.	မလေး မျှဝေတာ ကျေးဇူးပါ။ မှတ်သားရပါတယ်။ ဒါနဲ့ မဂျစ်က ပြောဖူးတယ်။ ပုံရိပ်ရေးပုံက အသက်နည်းနည်း ကြီးတဲ့လေသံမျိုးတဲ့။ မဂျစ်ကိုတောင် သတိရမိပါတယ်။
Comment by ပုံရိပ် — March 6, 2009 @ 9:07 pm
11.	မျှဝေတာ ကျေးဇူးပါ မလေး။ အယ်ဒီတာတွေရဲ့  ရင်ဖွင့်စကားတွေဖတ်ပြီး ပြုံးမိပါတယ်။
ညီမကတော့ တတ်လို့ရေးနေတာမဟုတ်လို့ ရေးရင်းနဲ့ ပိုတတ်အောင် လေ့လာနေဆဲပါ။
ကိုယ့်ရှေ့ကလူတွေ ရေးတာကိုလည်း ဖတ်ရင်း ပေါ့။
Comment by ShwunMi — March 7, 2009 @ 12:10 am
12.	တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ ပို့စ်ပဲ အစ်မရေ့ ကျနော်မနေ့တည်းကဖတ်ပြီးပြီး
ဆရာမောင်သွေးသစ် ပြောထားတဲ့ ကဗျာဆရာ ဆိုတာကိုလည်း အရမ်းသဘောကျတယ် ။ ဆရာမောင်တည်ငြိမ် ရဲ့ အယ်ဒီတာဖတ်ပြီး ကျနော်ကတော့ ပါးစပ်ဖွင့်ပြီးရယ်မိတယ် အစ်မရေ့ အယ်ဒီတာ့ နေရာမှာ ဘလော့ဂါဆိုရင်တော့ အဲ့ထဲက အချက်တော်တော်များများ ကိုယ်ပါနေတယ် ကျေးဇူး ဝေမျှပေးတာ ။
ဒါနဲ့ visitedလို့ပြောတဲ့သူတွေ တော်တော်ခေတ်စားလာတယ် စိတ်ကုန်လွန်းလို့ အဲ့လိုတွေ့ရင် ဆီပုံးတောင်ဖြုတ်ချင်စိတ်ပေါက်တယ် လေတယ် ဓာတ်
ကျနော်အဆင်ပြေပါတယ် အစ်မရေ့ ကျေးဇူးပါ။
Comment by မောင်မျိုး — March 7, 2009 @ 3:08 am
13.	စာအုပ်တွေ ဖတ်၊ မှတ်၊ စုဆောင်းသိမ်းဆည်းရတာကို အရမ်းသဘောကျတာပါ။ ရှဲဒိုးဆိုလို့ တကယ့်ကို နာမည်ကြီး စာရေးတဲ့သူတစ်ယောက်တောင် ရှဲဒိုးနဲ့ အမည်ခံထားတယ်ဆိုတာကို ဟိုတစ်နေ့လေးကမှ သိရတယ် မလေးရေ၊ လုံးဝကို မယဲုံနိုင်စရာ (ထိပါးစေလိုတဲ့စိတ်မရှိလို့ အမည်မဖော်ပြတော့ပါဘူး)။ မလေးဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်ရှိရင် ပြောနော်။ တခြားဆီကနေတစ်ဆင့် ညီမလေး ပို့ပေးလို့ရတာမျိုးဆို pdf file နဲ့ ပို့ပေးလို့ရတယ်။ စာအုပ်စင်မှာတော့ တင်ထားလို့မရဘူးပေါ့။
Comment by အေးချမ်းသူ — March 7, 2009 @ 4:46 am
14.	ပုံရိပ်... အဲဒါလဲတမျိုးကောင်းတာပဲ.. မလေးကိုဆိုလေးဆယ်ကျော်ထင်လို့ အချို့တွေက၊ မလေးလဲ ဂျစ်ကိုသတိရတယ်
ရွှန်းမီ .. မလေးလဲ ၀ါသနာက တားမရလို့ ညီမလေးရေ..
မောင်မျိုး .. visited လို့ပြောတဲ့သူတွေက တချို့က ဘာရေးရမှန်းမသိလို့၊ ဒါမှမဟုတ် အချိန်မရှိလို့လားမသိ။ ဒါပေမယ့် ဆီဗုံးမှာ သို့မဟုတ် ကော့မန့် အခုငါးဆယ်လုံးက visited လို့ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲမသိ
အေးချမ်းသူ .. သမာရိုးကျမဟုတ်တဲ့.. နာမယ်မကြီးတဲ့ ဘယ်သူမှမသိတဲ့ စာရေးဆရာတွေရဲ့ ဦးနှောက်ထဲကို ၀င်ကြည့်ချင်တယ်.. တကယ်အတည်ပြောတာ.. လူတိုင်းဖတ်တဲ့စာတွေ မဖတ်ချင်ဘူး။
Comment by မလေး — March 9, 2009 @ 10:47 am
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:11 AM No comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : စာအုပ်ခံစားချက်, အင်တာဗြူး
မရောင်းရလို့ စက်ရုံတစ်ဝိုက်က စမ်းသပ်တဲ့ ကွင်းထဲမှာ ဒီအတိုင်းပုံထားရတဲ့ Nissan ကားတွေ .. လုပ်သား ၁၂၀၀ လျော့ပစ်မယ်လို့လဲ သိရပါတယ်။
ဒါကတော့ တိုကျိုဆိပ်ကမ်းမှာ တင်ပို့ရန် အပုံလိုက်စောင့်နေတဲ့ ဟွန်ဒါကားတွေ နဲ့ .. ဗြိတိန်နိုင်ငံက ဂျဲဂွာကားတွေလဲ မရောင်းရလို့ စက်ရုံလုပ်သား ၄၅၀လောက် အလုပ်ပြုတ်မယ်ပြောနေကြပါတယ်။ အောက်မှာဆက်ကြည့်ကြပါရှင်။
Corby , Northamptonshire က ကားထားတဲ့ နေရာတွေလဲ လျှံကျကုန်ပြီ။
Sheerness မှာလဲ dealers တွေဆီပို့ရန် စောင့်နေတဲ့ ကားတွေ
ကာလီဖိုးနီးရားမှာ ဂျပန်က သွင်းလာတဲ့ တိုယိုတာတွေ ဆိပ်ကမ်းမှာ တောင်ပုံရာပုံ..
ကျမ သူငယ်ချင်း အီးမေးလ်နဲ့ ပို့ထားတဲ့ ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးကျလို့ အရင်းရှင်နိုင်ငံတွေကလူတွေ အသုံးအစွဲတွေ လျော့ချနေကြလို့ ရောင်းမထွက်တဲ့ ကားတွေရဲ့ ပုံတွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ သိပ်များနေလို့ ဆက်ပြီး မတင်တော့ပါဘူးနော်။ ဂျပန်ကားတွေတောင် အရှုံးပေါ်ရင် အမေရိကန်ဖြစ်ကားတွေဆိုရင်တော့ စကားထဲ ထည့်ပြောစရာတောင် မလိုတော့ပါဘူး။
ဒီပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ ကျမ ကနေဒါရောက်တဲ့ နေ့ကို ပြန်ပြောင်းသတိရလိုက်မိတယ်။ လေယာဉ်ကွင်းကနေ အကြီးတို့ ကျမကိုလာကြိုတုန်းက အိမ်အသွားလမ်းမှာ တံတားကြီးတစ်ခုကိုဖြတ်ရတယ်။ အဲဒီတံတားအောက်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ကားတွေရပ်ထားတာ ပင်လယ်ပြင်ကြီးလိုပါပဲ။ တစ်ခါမှလဲ မမြင်ဖူးတော့ ရင်သပ်ရှုမောဖြစ်နေခဲ့တယ်။ "အော်.. များလိုက်တဲ့ ကားတွေ၊ တစင်းလောက်တော့ ပိုင်ချင်လိုက်တာ" လို့ နှုတ်က တိုးတိုးလေး ရွတ်လိုက်မိတယ်။ "အဲဒီကားတွေက တိုက်ထားတာရယ်၊ ဘဏ်တိုက်ကို အကြွေးမဆပ်နိုင်လို့ရယ်၊ အာမခံငှာနက သိမ်းပြီးဒီမှာ လာပုံထားတဲ့ ကားတွေ" လို့ ကျမ အကြီးတို့က ပြောပြတယ်။
နောက်ကြာလာတော့ ကျောင်းကတဖက်၊ အလုပ်လေးတဖက်နဲ့ ဒေါ်လာတစ်ထောင်ကြီးများတောင်တန်တဲ့၊ ပထမဆုံးသော ချက်ပလက်ကြီးကို၊ လေလံပစ်တဲ့နေရာကနေ ကိုယ်ပိုင်ငွေလေးနဲ့ အောင်မြင်စွာ ၀ယ်ယူလိုက်တဲ့ နေ့ကိုလဲ ပြန်ပြောင်းမှတ်မိစေပါတယ်။
Economic Recessions တွေက ဒီနှစ်မှ ဖြစ်တာမဟုတ်တာတော့ လူတိုင်းလိုလိုသိကြပါတယ်။ ၁၉၇၃-၇၄ တုန်းက၊ ၁၉၈၁ခုနှစ်တုန်းက၊ ၁၉၉၁-၉၅ တုန်းက စသဖြင့် အမြဲပဲ ရှစ်နှစ်နဲ့ ဆယ်နှစ်တိုင်း ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီနှစ်ကတော့ ဂယက်ရိုက်ခတ်မှု တော်တော်ကြီးတယ်လို့ ဆိုရမလားဘဲ။
အရင်းရှင်တိုင်းပြည်တွေမှာ သုံးသုံးပြီး ပစ်ကြတဲ့ ပစ္စည်းတွေဆိုတာ မြင်လို့မကောင်းအောင်ပါပဲ။ အိမ်တွေမှာ မလိုအပ်ပဲ ပစ္စည်းတွေဟာ ပုံပုံလာတတ်ပါတယ်။ လိုတာထက်ပိုတော့ သိမ်းရတာက အလုပ်တစ်လုပ်ဖြစ်နေတယ်။ အခုလိုအသုံးအစွဲတွေကြီးလွန်းလို့ ဒီလိုစီးပွားပျက်ကပ်ဆိုက်တာမျိုးဖြစ်တာလဲ မဆန်းလောက်ပါဘူး။ credit system ဟာ မှန်လား၊ မမှန်ဘူးလားဆိုတာလဲ စဉ်းစားစရာဖြစ်နေပါပြီ။
အရင်တုန်းက ထမင်းဗူးဘယ်တော့မှ မထုတ်တဲ့ကျမ၊ ရုံးအောက်က cafeteria မှာ နေ့လည်စာ အမြဲဝယ်စားတဲ့ ကျမ၊ နေ့လည်စာ ရှစ်ဒေါ်လာကနေ တစ်ဆယ်ဒေါ်လာလောက် အမြဲကုန်နေရာကနေ၊ အခုတော့ အကုန်မခံနိုင်တော့လို့ နေ့စဉ်ထမင်းဗူးထုတ်နေပါပြီ။ ဒီနေ့တော့ အိမ်ကထုတ်လာတဲ့ အေးစက်စက် အသားညှပ်မှုန့်ကိုစားနေရင်း ငယ်ငယ်တုန်းက ရွတ်ဖူးတာလေး သွားသတိရမိပါတယ်။
ဂါဝန်လေးနဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက် လက်ကလေးပိုက်ပြီး ၊ သူမ ဖေဖေနဲ့မေမေကို အဲဒီကဗျာလေး ရွတ်ရွတ်ပြတတ်တာကိုလဲ ပြန်ပြီး မြင်ယောင်နေမိပါတယ်။ သူမဟာ သူမရွတ်တဲ့ကဗျာလို ကျင့်သုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်... ကနေဒါကိုလဲ ရောက်လာလိမ့်မယ် မထင်ပါဘူးရှင်။ ခုတော့လဲ အေးစက်စက်တိုင်းပြည်မှာ အေးစက်စက် အသားညှပ်ပေါင်မုန့်စားရင်း၊ အေးစက်စက်ဖန်သားပြင်ကြီးကို ငေးကြည့်နေပါတော့တယ်ရှင်။
Comments from www.ainchannmyay.com
ပေါလိုက်တဲ့ကားတွေပါလားဗျ ဘယ်လောက်လဲမသိ ရောင်းမထွက်တော့ လျှော့ဈေးနဲ့များရမလားလို့ :P ကဗျာလေးဖတ်သွားတယ် အစ်မရေ့ ။
ခုတော့လဲ အေးစက်စက်တိုင်းပြည်မှာ အေးစက်စက် အသားညှပ်ပေါင်မုန့်စားရင်း၊ အေးစက်စက်ဖန်သားပြင်ကြီးကို ငေးကြည့်နေပါတော့တယ်။
အဲ့တာတွေမတွေးတော့ပဲ ရောက်တဲ့အရပ်မှာ ပျော်အောင်နေ
တွေ့တဲ့သူနဲ့ တည့်အောင်ပေါင်း ဒီလိုနေလိုက်တော့ :)
Comment by မောင်မျိုး — March 4, 2009 @ 6:31 pm
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 6:31 PM 1 comment: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
(ဒီလင်ခ့်)ကို ကျမဆိုဒ်ဘေးမှာ တင်ထားတာတော့ ကြာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် စာဖတ်သူများ ပိုမြင်သာအောင် ဒီမှာ တင်ထားပေးတာပါ။
အစ်မရေ ဟိုတစ်ခါတော့သွားကြည့်ဖူးတယ်..။ စိတ်ဝင်စားတယ်..။ စာတော့အပြတ်ကြိုးစားထားရမယ်..။
Comment by Phyo Evergreen — March 4, 2009 @ 6:51 am
Comment by Snow — March 4, 2009 @ 4:39 pm
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 6:28 PM No comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : Canadian Schools